Archive du 20190305
Mialy Rajoelina Fa aiza marina ?
Natao resaka foana ny vadin’ny filoha teo aloha Rtoa Voahangy Rajaonarimampianina hatramin’izay ka isan’ny asesika hatramin’izao ny hoe: nankaiza i Voahangy? Vao tsy ela no natao lohateny goavana tamina fampahalalam-baovao aza ny karazana kisarisary toa manompa sy maneso ny filoha teo aloha.
Fahalalana maneho hevitra Mihemotra ny demokrasia eto Madagasikara
Mihemotra ve ny fahalana maneho hevitra? Mihemotra ny demokrasia? Misy ny tranga eto amin’ ny- firenena azo heverina fa misy rariny amin’ ny zava takiana sy tiana hatao.
Mandra-panendry Governoran’ny faritra Napetraka ireo tompon’andraikitra hampiodin-draharaha
Nivoaka ny naoty manendry vonjimaika ireo tompon’andraikitra ambony hisahana ny fampiodinan-draharaha eny anivon’ny faritra, taorian’ny didim-panjakana 2019-155 nivoaka ny 20 febroary lasa teo nanafoanana ny fanendrena ireo lehiben’ny faritra; karazana ekipa manokana ny fahitana azy ireto.
Fifidianana solombavambahoaka Lasa fifaninanana amin`ny alalan`ny vovonana politika
Mbola manomana sy ao anaty fifantenana kandidà harotsaka ihany koa ny ankamaroan`ny antoko politika izay saika nivondrona ao anaty vovonana ny ankamaroany.
Eddy Boaderzy Misy mitady hamono...
Io fa nandeha ny ampamoaka momba ny raharaha Eddy Maminirina. Nisy nidilatra ny resaka fanadihadiana sy famotorana, hany ka nivoaka ny resaka mombana manamboninahitra jeneraly, mpikambana ao anatin’ny governemanta.
Jean Nirina HAFARI Nidoboka any am-ponja indray
Nampidirina am-ponja vonjimaika omaly hariva ny filoha nasionalin’ny fikambanana Hafari Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina taorian’ny nakana am-bavany azy teny amin’ny Fitsarana.
Olana fototra mampitroatra ny polisy Efa ela loatra ny fampiakarana karama farany
Araka ny tafatafa manokana nifanaovana tamina polisy vitsivitsy, mbola mitoetra ho olana goavana ny karaman’izy ireo.
Kaominin’i Mahitsy RN 4 Misitraka ny asa hirahana amin’ny association AVOTRA
Tao aorianan’ny fizarana zezika sy masomboly ary sakafom-biby nanerana ny kaominina 24 ao amin’ny distrikan’Ambohidratrimo nataony dia moiroso amin’ny fanaovana foto-drafitr'asa samihafa indray ankehitriny ny asa sosialy ataon’ny association AVOTRA "Andry sy VOnjy ho an’ny reheTRA"
Ligin’ny Volley-ball Analamanga Tontosa ny famindram-pahefana
Tontosa omaly alatsinainy 04 martsa 2019 teny Ambohimanoro ny famindram-pahefana teo amin’ny fitantanana ny ligin’ny volley-ball eto Analamanga izay notrehan’ny Natolotry ny filoha teo aloha, Rasamison F Hajaniriana sy ny ekiopany tamin’ny ekipan’ny filoha vaovao,
Telma Coupe de Madagascar Ireo ekipa 24 tafita tamin’ny dingana savaranonando
22 tamin’ireo lalao 25 tokony ho notontosa no vita soamanantara tamin’ny sabotsy 2 sy alahady 3 martsa teo eo amin’ny lalao savaranonandon’ny fifaninanana baolina kitra fiadiana ny amboaran’i Madagasikara “Telma Coupe de Madagascar 2019”.
Mpamily taskibe nampianjera mpandeha Migadra 5 volana sy mandoa onitra 5 tapitrisa ariary
Mihidy an-tranomaizina 5 volana, sazy mihatra ary mandoa onitra 5 tapitrisa ariary ny mpamily ilay taksibe nampianjera mpandeha iray tetsy Ambohijatovo volana vitsy lasa izay.
TIM K 25 Boriboritany fahaefatra Hanatsara ny fiantsonan’ny fasan’ny Karana
Manoloana ny fitarainan’ireo mpanjifa sy mpitatitra eo anivon’ny toeram-piantsonana eny amin’ny Fasan’ny Karana izay ahitana fako misavovona mety
Mpilatro sy mpanjaitra lamaody mendrika Hikarakara fifaninana ny ECCOVA
Mba ho fampiroboroboana ny vita Malagasy sy hanomezan-danja ny sehatry ny lamaody dia hikarakara fifaninana ho an’ireo mpampilatro sy mpanjaitra lamaody manerana ny nosy ny « Ecole de Coupe et Couture Volana ».
Fandraharahana amin’ny fambolena Tsy ampy ny fanofanana ireo tanora
Olana hatrany eto Madagasikara ny tsy fahampian’ny fanofanana momba ny fandraharahana ny amin’ny fambolena. Maro be anefa ankehitriny ireo tanora efa mitodi-doha amin’io sehatra io.
Ady amin’ny tsy fandriampahalemana Maro ny zavatra tokony hahitsy, hoy ny Praiminisitra
Nitsidika ny tananan’i Maevatanana, ao amin’ny Faritra Betsiboka ny Praiminisitra Ntsay Christian notronin’ireo minisitra voakasiky ny fandriampahalemana sy ny fanapariaham-pahefam-panjakana omaly.
Nisehoana asan-jiolahy indray ny alin’ny alahady teo teny Alakamisy Anosiala. Tokantrano maromaro no norobain’ireo jiolahy ary lehilahy iray no namoy ny ainy voaray. Nahitana bala iray teo an-tokontany nandritra izany fanafihana izany, raha ny fampitam-baovao hatrany
Fampiroboroboana ny sehatra fizahan-tany Handresy lahatra any Berlin i Madagasikara
Handray anjara amin’ilay fampirantiana goavana maneran-tany momba ny fizahan-tany hotanterahina ny 6 hatramin’ny 10 martsa ho avy izao any Berlin Alemana (ITB) i Madagasikara. Delegasiona mafonja no hiainga eto izay ahitana ny Ofisy Nasionalin’ny Fizahan-tany eto Madagasikara (ONTM) miaraka amin’ireo mpandraharaha misehatra amin’ny fizahan-tany eto an-toerana.